केपी ओलीदेखि सीके राउतसम्म : सामाजिक सञ्जालमा को कति सक्रिय ?
सामाजिक सञ्जालको रूपमा फेसबुक र ट्वीटरको आगमनपछि विश्व अत्याधिक साँघुरिएको छ । यसले आफुलाई वैकल्पिक मिडियाको रूपमा जबर्जस्त उभ्याएको छ । यसको उपयोगिता, प्रभाव र दुष्प्रभावहरूलाई लिएर बहसहरू समेत व्यापक भइरहेका छन् । तर यसपछिको विकल्प के भन्ने प्रश्न चैँ अझै अनुत्तरित नै छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाललाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न ढंगले प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रयोग जे जसरी भए पनि सामाजिक सञ्जालमा नजोडिनु भनेको अहिले ‘असामाजिक’ हुनुसरह भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा कति सक्रिय छन् ? उनीहरूले त्यसको कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर यहाँ १२ जना नेताको सामाजिक सञ्जाललाई नियालिएको छ ।
केपी शर्मा ओली : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालमा ठिकै सक्रिय छन् । फेसबुक र ट्वीटर दुवैमा प्रधानमन्त्री ओलीको अकाउण्ट छ । उनको फेसबुक अकाउण्ट ‘भेरिफाइड’ छ । ट्वीटरमा भने उनको अकाउण्ट ‘भेरिफाइड’ छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको पेजलाई फेसबुकमा साढे ४८ हजार जनाले लाइक गरेका छन् भने ट्वीटरमा उनलाई ४ लाख ३५ हजारले ‘फलो’ गरेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक सक्रिय छन् । उनको फेसबुक पेजबाट पार्टीको विज्ञप्तिदेखि प्रायः सबै कार्यक्रमहरूमा उनले गरेको सम्बोधनको लाइभ समेत गरिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डको फेसबुक पेजलाई ४ लाख ३० हजार जनाले ‘लाइक’ गरेका छन् भने ट्वीटरमा उनलाई २ लाख १२ हजार जनाले ‘फलो’ गरेका छन् । उनको फेसबुक र ट्वीटर दुवै अकाउण्ट भेरिफाइड छ ।
शेरबहादुर देउवा : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अत्यन्तै कम र ट्वीटरमा ठीकै सक्रिय छन् । उनको फेसबुक पेजलाई २ हजार २ सयजनाले मात्रै लाइक गरेका छन् । ट्वीटरमा भने देउवालाई १ लाख ८४ हजार जनाले ‘फलो’ गरेका छन् । विभिन्न पर्वहरूमा शुभकामना, विभिन्न व्यक्तिहरूको निधनमा श्रद्धाञ्जली र दुर्घटनाहरूप्रति दुःख प्रकट गर्न देउवा प्रायः ट्वीटर नै प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
माधवकुमार नेपाल : सामाजिक सञ्जालमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सक्रियता पनि नराम्रो छैन । नेता नेपाल ट्वीटर भन्दा फेसबुकमा नै बढी सक्रिय छन् । ट्वीटरमा उनको २ हजार ३ सय हाराहारी ‘फलोअर्स’ छन् । तर फेसबुकमा भने उनलाई साढे ७१ हजारले पछ्याएका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई : पूर्वप्रधानमन्त्री एवँ नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै सक्रिय रहने नेता हुन् । डा. भट्टराई फेसबुक र ट्वीटर दुवैमा उत्तिकै सक्रिय छन् । आफ्ना विचार तथा आफु सहभागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको जानकारी उनी फेसबुक र ट्वीटरमा दुवैबाट दिन्छन् । विभिन्न राजनीतिक घटनाहरूप्रतिको टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया पनि उनी सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नै प्रकट गर्छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा उनलाई पछ्याउनेहरू पनि अत्यन्तै धेरै छन् । भट्टराईको फेसबुक पेजलाई साढे १३ लाखले लाइक गरेका छन् भने ट्वीटरमा उनलाई १० लाख ७२ हजारले ‘फलो’ गरेका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भन्दा ट्वीटरमा बढी सक्रिय छन् । ट्वीटरमा श्रेष्ठलाई २ लाख १५ हजारले पछ्याएका छन् । सार्वजनिक चासोका विषय र राजनीतिक घटनाक्रमहरूमाथि उनी ट्वीटर मार्फत् नै प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
उपेन्द्र यादव : संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सामाजिक सञ्जालमा खासै सक्रियता छैन । उनी बेलाबखत आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित समाचारहरू शेयर गर्ने गर्छन् । अन्य नेताहरू तुलनामा यादवलाई फेसबुक र ट्वीटरमा पछ्याउनेहरूको संख्या समेत अत्यन्तै कम छ । उनको फेसबुक पेजमा ४ हजार २ सयले मात्रै लाइक गरेका छन् भने ट्वीटरमा उनलाई पछ्याउनेको संख्या २ हजार ८ सय मात्रै छ ।
गगन थापा : नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग फेसबुक र ट्वीटर दुवैमा ‘भेरिफाइड अकाण्ट’ छ । सामाजिक सञ्जालमा उनका सक्रियता पनि राम्रै छ । उनी प्रायः सबै पर्वहरूमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् शुभकामना दिन पछि पर्दैनन् । बेलाबेलामा सार्वजनिक विषयहरूप्रतिको आफ्नो अभिमत समेत उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गर्छन् । उनको फेसबुक पेजमा २ लाख ६९ हजार जनाको लाइक छ । त्यस्तै उनलाई ट्वीटरमा ८ लाख ७० हजार जनाले पछ्याएका छन् ।
कमल थापा : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा राम्रै सक्रिय छन् । यद्यपि उनको सक्रियता फेसबुकमा नभई ट्वीटरमा मात्रै छ । ट्वीटरमो उनको ‘भेरिफाइड’ अकाण्ट छ । आफ्ना राजनीतिक गतिविधि, योजना र कार्यक्रमको जानकारी उनी ट्वीटर मार्फत् नै दिने गर्छन् । बेलाबेलामा सार्वजनिक विषयहरूप्रति आफ्नो राय, टिप्पणी र अभिमत प्रकट गर्न समेत उनी ट्वीटरको साहारा लिन्छन् । ट्वीटरमा उनलाई ५ लाख ९० हजारजनाले पछ्याएका छन् ।
विश्वप्रकाश शर्मा : नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको पनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै सक्रियता छ । विभिन्न विषयहरूमा पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रकट गर्न शर्माले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्ने गरेका छन् । पार्टी प्रवक्ता हैसियतमा मात्र नभई उनी आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रवाह गरिराख्छन् । उनलाई फेसबुकमा ७२ हजारभन्दा बढीले पछ्याएका छन् । ट्वीटरमा भने शर्माको १ लाख ४५ हजार हाराहारी ‘फलोअर्स’ छन् ।
योगेश भट्टराई : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता योगेश भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न माहिर छन् । जल्दाबल्दा विषय र घटनाहरूमा उनी आफ्ना टिप्पणी तथा प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नै सार्वजनिक गर्छन् । उनका स्टाटस तथा ट्वीटहरूले बेलाबखत पार्टीभित्र र बाहिर बहस समेत सिर्जना गर्दछ । फेसबुकमा उनको ‘भेरिफाइड अकाउण्ट’ छ, जसलाई डेढ लाख हाराहारी प्रयोगकर्ताले पछ्याएका छन् । ट्वीटरमा भने उनको २ लाख ५९ हजार ‘फलोअर्स’ छन् ।
सीके राउत : विखण्डनको मुद्दा लिएर राजनीतिमा आएका सीके राउत सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा छन् । सरकारसँगको सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको दाबी गरिएका नेता राउतको सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि राम्रै चहलपहल छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक राउतको फेसबुकमा ‘भेरिफाइड अकाण्ट’ छ, जसलाई ५ लाख १४ हजारले लाइक गरेका छन् । ट्वीटरमा भने उनको २४ हजार ६ सय हाराहारी मात्रै ‘फलोअर्स’ छन् ।